IZITHOMBE NE-VIDEO: Isiphepho esinemvula sibanga izinhlekelele eSpain | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Totana (Murcia). Isithombe - Totana.es
Izolo bekuwusuku esingeke silukhohlwe kalula. Imvula engaphezu kuka-120l / m2 ishiye imigwaqo eminingi kuyo yonke iningizimu-mpumalanga yenhlonhlo kanye neziQhingi zeBalearic zigcwale ngokuphelele. Kodwa hhayi kuphela amanzi aba yinkinga, futhi nomoya.
Kwakunezikhathi lapho ukuqhuma okukhulu kuqhume ngaphezu kuka-70km / h, okwenezela ezimvuleni ezinkulu, kuguqule lokho obekuzoba nje yiSonto eliguqubele, kwaba yiSonto lapho iningi lethu kwakumele lithathe i-mop ukukhipha amanzi angena endlini. Lawa ngamavidiyo nezithombe ezihlaba umxhwele kakhulu kule sizini yemvula esishiyele zona.
1 Yini ebangele lesi siphepho?
3 Izithombe namavidiyo
Yini ebangele lesi siphepho?
Isimo somkhathi besimi kanje:
Cishe ngamamitha angama-5500 wokuphakama, i-DANA yasungulwa ngoDisemba 17, okungukuthi, lokho okwaziwa ngokuthi yiCold Drop noma i-Isolated Depression emazingeni aphezulu oLwandle iMedithera, ikakhulukazi eNyakatho Afrika. Lokhu kusho ukuthi ukuphakama kwakukhona isikhwama somoya obandayo kunomoya ozungezile owawunengcindezi ephansi.
Eningizimu-mpumalanga yenhlonhlo naseziQhingini zaseBalearic sine- uhlelo lwengcindezi oluphansi oluheha umoya onomswakama ngenxa yendlela ende yasolwandle ethwalwa umoya wasempumalanga, ngaleyo ndlela kwakheka ukugeleza komoya oswakeme onenqwaba yamanzi angenakugwilika noma, ngamanye amazwi, umfula osemkhathini. Lo mfula ubheke ngaseValencia, eMurcia, empumalanga ye-Almería naseziQhingini zaseBalearic.
Ngakho-ke, ngokungeza zonke lezi zinto, kudalwe izimo ezikahle ukuthi zehle ngaphezu kuka-120l / m2 emahoreni ambalwa nje kwamanye amaphuzu. Ngokwalesi sizinda, i-AEMET yakhipha isaziso esiwolintshi esasisebenza ngesikhathi sokushicilela le ndatshana.
Emphakathini waseValencian, eMurcia naseziQhingini zaseBalearic, izimvula zazinamandla futhi zabangela izikhukhula. Izikole eziningi zivaliwe namhlanje ngenxa yokungakwazi ukufinyelela kuzo, naseMurcia bangaphezu kuka-350 abantu okudingeke ukuthi basindiswe ezimotweni nasemakhaya. E-Almería, izimvula ezinamandla ziphoqe ukwenziwa kusebenze koHlelo Oluphuthumayo.
Kepha, ngaphezu kwezikhukhula, ngeshwa nathi kumele sikhulume ngomufi. Lokhu okwesikhashana ibulale abantu abathathu.
Nazi izithombe namavidiyo isiphepho esisishiyile:
Umgwaqo ogcwele ngokugcwele e-Orihuela (Alicante).
Isithombe - Morell
Abasebenzi ababili abazama ukuvala umgodi eTeniente Flomesta avenue, eMurcia. Isithombe - EFE
I-UME yakha isizinda sayo eLos Alcázares (Murcia), lapho abantu abaningi kwadingeka bakhishwe khona.
Isithombe - Felipe García Pagán
Iloli eLos Alcázares, elinye lamadolobha athinteke kakhulu.
ILos Alcázares, yagcwala amanzi.
Umgwaqo ogcwele amanzi eSes Salines (Mallorca), namhlanje ekuseni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » IZITHOMBE NE-VIDEO: Isiphepho esinemvula sibanga izinhlekelele eSpain
ILos Alcáceres iyidolobha elisesifundeni iMar Menor. Umfula iSegura ukude nalapho. Ngikusho ngamazwibela wesithombe se-UME.